Bayaanka FSF ee iPhone 6, Apple Pay, iyo Apple Watch | Laga soo bilaabo Linux
Sida la ogsoon yahay inta badan Sebtember 9, 2014 Apple waxay soo bandhigtay noocyadeeda kala duwan ee cusub iPhone 6, 6+, Apple Pay iyo Apple Watch. ka Aasaaska Software Free [FSF] war ka soo saaray:
Bayaanka FSF ee ku saabsan iPhone-ka cusub, Apple Pay, iyo Apple Watch oo ay bixiso Free Software Foundation
La daabacay Sep 9, 2014 02:14 PM
La FSF waxay ku dhiirrigelisaa dadka isticmaala inay ka fogaadaan dhammaan alaabada Apple, iyadoo loo daneynayo xorriyaddooda iyo xorriyadda kuwa ku hareeraysan.
Maanta [9/9/2014], Apple waxay shaacisay moodallo cusub oo iPhone ah, saacad casri ah, iyo adeeg lacag bixin ah. Isagoo ka jawaabaya agaasimaha guud John sullivan Waxaan sameeyaa bayaanka soo socda:
Waa layaab badan in la arko tiknoolajiyad saxaafadeed aad u badan oo u dhaqmeysa sidii suuqgeynta Apple ee suuqgeynta. Waxa maanta la soo bandhigayo ayaa ah wada shaqeyn qarsoodi ah faafinta faafinta ugu muhiimsan - dagaalka socda ee Apple ee ka dhanka ah xorriyadda xisaabinta shaqsiga - iyo kordhinta xorriyadda hadalka, ururka, asturnaanta iyo hal-abuurnimada farsamada.
Dhaliil kasta oo ku guuldareysta inuu xuso ku adkeysiga Apple ee isticmaalka Maareynta Xaddidaadda Dijital ah (DRM) inay xannibaan aaladaha iyo barnaamijyada ay iibinayaan waxay wax u dhimeysaa macaamiishooda, waxayna dhabar jab ku tahay horumarka bulshada oo ah mid ka madax banaan dijitaalka oo aan hadda u baahanahay. Qof kasta oo ka hadla waxyaabaha gaarka ah ee farsamada ah isagoon marka hore soo bandhigin dharka anshax darrada ah ee ay soo saaraan alaabadani waxay ka caawineysaa inay dadka u horseedo waddo ku dhammaata awood-siinta dhijitaalka ah oo dhammaystiran.
Ku hay tiro inta dib u eegis ee maanta la sheegayo in Apple ay u hanjabeyso qof kasta oo isku daya inuu isku dayo inuu ku rakibo nidaam kale oo hawlgal ah sida Android taleefankooda, ama wajaha maxkamad dambiyeed iyada oo la ilaalinayo Xeerka Nuqulada Nuqul ee Millennium Digital (DMCA). Tiri inta dhalleeceyn ee tilmaamaysa in aaladaha Apple aysan oggolaanayn rakibidda codsi kasta oo aan la oggolaan, iyagoo mar kale ku hanjabaya waqtiga xabsiga haddii aad isku daydo inaad tan sameyso adigoon ka helin barakada Apple, intee in le'eg oo dhaliil ah ayaa muujineysa in Apple ay adeegsato shatiyadaha software-ka ciidan qareeno ah oo weerara kuwa horumariya jawi xisaabeed ka xor ah kan ay wataan.
Waxaan aragnay tusaalooyin dhowr ah tan iyo markii ay soo saartay shirkaddii ugu dambeysay ee Apple shaacisay, xilliyadii taleefannada casriga ah iyo qalab kale loo adeegsaday dhaqdhaqaaq siyaasadeed iyo hadalka xorta ah. Waxaan sidoo kale aragnay tusaalooyin dhowr ah oo jeer markii tibaaxahaasi faaf reeb lagu sameeyay. Haddii aan sii wadno inaan u oggolaano Apple noocan ah xakamaynta dijitaalka ah, faaf-reebka iyo "aagagga hadalka ee bilaashka ah" waxay noqoneysaa mid joogto ah.
Waxaa jira sabab uu abuuraha kombiyuutarka ugu horeeya ee barnaamijka lagu dhex arko barnaamijku uu ku diido aaladaha Apple inay yihiin ka soo horjeedka qaababka nolosha ee hal-abuurka. Laakiin kuma filna kaliya in la yiraahdo “Ha iibsan wax soo saarkooda ". Shuruucda Apple iyo kuwa kale ay u adeegsadaan inay ku dhaqan galiyaan xayiraaddooda dhijitaalka ah, iyaga oo siinaya iyaga faa'iido tartan ah oo ka badan badeecadaha la kabo ee ixtiraamaya xorriyadda isticmaalaha, waa in dib looga noqdaa
Ugu yaraan saacaddu waxay ku dhammaatay inay leedahay xirmo furi kara - waan ka walaacnay tan.
Waxaan ka codsaneynaa isticmaalayaasha inay baaraan siyaabaha lagu taageerayo isticmaalka mobilada iyo aaladaha la qaadan karo oo aan xadidayn xorriyadaha aasaasiga ah ee isticmaalayaasha. Mashaariicdan oo kale waxaa ka mid ah Replicant, fargeeto software bilaash ah oo ku saleysan Android, iyo F-Droid, meel lagu keydiyo barnaamijyada softiweer ee bilaashka ah ee loogu talagalay Android. Dadku sidoo kale waa inay ogeysiiyaan Tim Cook Apple sida ay dareemayaan
Uma arko naftayda "Taalibaan" ee Software-ka Bilaashka ah, ama haddii si kale loo dhigo, anigu kama ihi mid ka mid ah kuwa ugu "nadiifsan". Waxaan ahaa qof aad u faraxsan oo adeegsada Opera illaa ay ka tagayaan mashiinkooda, runtiina ma daryeelin wax badan haddii ay ahaan lahayd 100% SWL ama maahan, Android maahan 100% SWL (mana ahan SDK) oo wali jecel.
Meesha aan rabo in aan ku tago waa taas ... hal shay ma ahan in uu noqdo "xagjir", tan kale waa in aad siisaa xorriyaddaada sida aad rabto. Apple ma ixtiraamto xorriyad kasta, haddii aad ka iibsato qalab iyaga ka mid ah qiimo la yaab leh (oo aan ku jirin dareenka togan) ku dhowaad in xaqiiqda ay tahay maahan mid adiga kuu gaar ah, waa "kireysi", maxaa yeelay waxaad ku bixisaa lacag aad u tiro badan qalab gebi ahaanba ka weyn iyo Weli ma sameyn kartid waxaad rabto
Taasina waa qodob kale, qiimaha ... waa wax layaableh in iPhone 6 ay ku kacdo lacag aad u badan waana qalab ku dhow kii 2 sano ka hor ... kaalay, cajiib _¬ ...
Sikastaba, maxaad u maleyneysaa arintan?
PS: Isha tarjumaadda aadanaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Bayaanka FSF ee ku saabsan iPhone-ka cusub, Apple Pay, iyo Apple Watch
72 faallooyin, ka tag taada
Maahan in loo noqdo taliban, laakiin ugu yaraan Google waxay ku leedahay doorbidyada akoonka macluumaadka ay kugu baareen (xitaa taariikhda baalashadaada). Taasi waa wax si waalli ah waxtar u leh xitaa markii aad seegtay bogga internetka ee aad rabtay inaad dhigto markii aad maqaal qorayso.
Ugu dambeyntiina uguyaraan, Gizmodo wuxuu muujinayaa in Apple yahay a neceb soo jiidasho.
Ka sokow, Apple miyuu mar hore saaray laba badhan (bidix iyo midig guji) taabta taabashada MacBooks ama jiirkaaga? Sababtoo ah uma adkaysan karo inaan yeesho guji jiir, iyo xitaa intaas ka sii yar, iyada oo la adeegsanayo khariidad dhexdhexaad ah.
Iyo sameynta mowduuc ka baxsan, halkan waxaa ku soo dhacaya warka sheegaya in Kooxda Debian iyo FSF isugu yimaadaan dadka isticmaala si ay u bartaan sida loo doorto qalabka ay u baahan yihiin.
Adeegsiga ereyada, sida kuwa calaamadaha sheegashada, waxay qaadataa wax badan oo culus goobta, kaliya eeg sida ugu badan ee goobaha xirfada leh aysan u sameynin.
Waxaa laga yaabaa sababta oo ah bog uu hal-ku-dhiggiisa ula muuqdo erayga "xorriyad" oo uu ku calaamadeynayo kuwa ku dhaqma "Taalibaan" uma muuqanayo mid is-raacsan
Ma noqon kartid "xad-dhaaf" haddii waxa aad sameyneyso ay raacaan nidaamka. In kasta oo raacitaanka xeerkaasi aanu caadi ahayn.
Waana inaan jecel nahay ama aan jeclaanaynin marka aan yeelanayno fikrado ka sameysma bogagga akhristayaashaada, sidaas darteed waa inaad daryeeshaa foomamka. Waxaad haysataa mid ka mid ah luqadaha ugu qanisan, Isbaanish, waxaa jira kumanaan siyaabood oo isla isla wax loo dhihi karo iyada oo aan kor loo qaadin fikradaha fikradaha xiisaha leh.
Taleefanka ugu iibinta badan adduunka ayaa nasiib daro ah bartilmaameedka muuqda ee kuwa jecel basaasnimada iyo xakamaynta (Maanta waxaan haynaa caddayn, xitaa saraakiisha caddaynaya in tani aysan ahayn fikrad shirqool) bulshooyinka macaamiisha ah.
Saas ma aha, waxay u sameeyaan si looga hortago in dadka la xumeeyo. Laakiin waxay umuuqataa inaadan waligaa ka farxin karin qof walba.
Waxaan mar kale ku celinayaa faalladayda, haddii waxa loogu talo galay aanu ahayn in cidna lagu xumeeyo, markaa fikradaha xiisaha leh ee loo yaqaan "pejorative" waa inaan loo abuurin koox kasta.
Eeg mid kasta oo dhexdhexaad ah oo takhasus leh oo leh shahaado xirfadeed (Laga soo bilaabo dhexdhexaad kasta, ma aha oo keliya xisaabinta) oo arag haddii ay ku kala soocaan akhristayaashooda calaamadaha. Xitaa xitaa inta badan jilicsanaanta lama arko.
Ma qiyaasi karo war-baahinta CNN ...
- Iyo wararka caalamiga ah:
Koox ka mid ah "xagjirka Sudacas" ayaa banaanbax ka dhigaya fagaaraha magaalada caasimada ah si ay u dalbadaan in wax laga badalo golaha wasiirada "tuugada" ee la socda mudanaha, musharaxa xisbiga "Reds", sidii had iyo jeerba, isla kooxdaas "crybabies". ..
Waxaan u dhigeynaa xigashooyin si NAAAADIE looga xumaado, oo hadda loogu jiro cayaaraha….
Haddii aan ku dhejiyo calaamadaha xigashada, waxaan aqriyaa faallooyinkaan, in haddii ay yareyneyso halista goobta iyo wixii la mid ah ... si kastaba ha noqotee, haddii aan dhigo iyaga oo aan xigashooyinka lahayn, waxaan aqrin doonaa faallooyinka ka imanaya isticmaalayaasha dareemaya xanaaq, in haddii "Ma isticmaalo koodhadh lahaansho taasna igama dhigayso inaan noqdo Daalibaan ama xagjir"… iyo wixii la mid ah.
Sidaad u aragto, had iyo jeer waxaa jiri doona qof ka faallooda wixii uu ku khilaafsan yahay boostada, macluumaadka, ama habka aan u dhigayo ... cajiib ah kaalay ...
Haddii ay ka xumaadaan calaamadaha oraahda, oo aan lahayn calaamadaha oraahda waa laga xumaadaa… Mhh «Uma baahnid inaad caqli yeesho» (marka loo eego xayeysiisyada Samsung) si aad u aragto in laga yaabo in calaamadaha oraahdu ay ugu yar yihiin , iyo Foomamka ayaa ah dhibaatada, iskuday inaadan isticmaalin ereyadaas waxaadna arki doontaa sida aan qofna uga xumaan.
Shaqaalaha: Dhibaatada halkaan ka jirta ma ahan xigashooyinka, waa faallooyinka (ka baxsan ama aan ahayn) oo aan waxba soo kordhineynin oo kaliya abuuraya khilaaf aan loo baahnayn. Haddii aad hayso wax soo-jeedin ah oo ku saabsan qoraaga boostada, ama Maamulka FromLinux, marinnada isgaarsiintu waxay ku jiraan isku xirka Mareykanka » https://blog.desdelinux.net/nosotros/
Haa, sidaa darteed waa in aanan dhigin ereyo sida xagjir, Taalibaan, ama wax kastoo ay tahay oo tilmaamaya heerka ballanqaadka, adeegsiga, aqbalaadda ama xagjirnimada (hab wanaagsan) ee qof uu ka qabo SWL ... xiise ...
War ninyahow kaalay!
Halkan dhammaanteen waan ka da 'weyn nahay, haddii qof doonayo inuu dareemo xanaaq maxaa yeelay waxaan dhahaa wax sida:
Waa hal shay in la noqdo «xagjir» iyo mid kale oo xoriyaddeena laga siiyo qof walba ... «- iyadoo loo tixraacayo xaqiiqda in kastoo ay jiraan isticmaaleyaal doorbida inaysan isticmaalin koodhadh lahaansho ama darawallo bilaash ah iyo kuwo kale, haa, hal shay ayaa ah heerkaas ama go’aankaas mid kalena aad ayuu uga duwan yahay si fudud ayeynu nafteena ugu siineynaa Apple macnahaas oo dhan.
Hagaag, waa si daacad ah maxaa yeelay:
- Waxaad rabtaa in lagu xumeeyo, sidaas oo kale
- Waxaad leedahay maalin xun oo aad falceliso waxkastoo ku dhibaya wax yar uun
- Isku day inaad xoogaa taabato kubbadaha 😉
By habka, ma aha wax la mid ah oo ku saabsan "cas" ama "sudacas", maxaa yeelay kuwani waa si toos ah siyaabo lagu xumeeyo ama lagu xaqiro qof.
Waxaan mararka qaar ugu yeeraa dadka qaar xagjir ama Taalibaan (sida Stallman waan tagnaa) oo raba inay ka nadiifsanaadaan cid walba, waad ogtahay ... daahiriyayaal maxaa yeelay waxay go'aansadeen inay isticmaalaan SWL saafi ah, xagjir ah maxaa yeelay waxay aadaan xagal, dhamaadka. 100% SWL iyo 0% lahaansho. Waxay yihiin sifooyin gabi ahaanba ansax ah oo soo socda, ma fahmin meesha dhibaatadu dhab ahaan ka jiri karto.
Xitaa mararka qaarkood waxaa si toos ah layguugu yeeraa xagjir, xagjir iyo Taalibaan, mana aanan dhibsan taas mana la i garaacin, xitaa ma aaminsani sifada si dhab ah in la ii tilmaamo.
@Staff runtu waa taas:
1.- Xigashooyin ayaga ayaa laga xumaadaa.
2.- xigashooyin la aan ayagaa laga xumaadaa.
3.- Adiga oo aan adeegsan "ereyadaas" way dhibsan yihiin, laakiin haddii aad isticmaasho iyaga la'aanteed kuwii hore way ka sii xun tahay.
Sikastaba, marwalba waxaa jiri doonta cabasho ku saabsan boostada, sababaha X ama Y, sababtoo ah madax walba waa adduun, inbadan oo kamid ahna waa musiibo buuxda.
Aan adeegsado ereyadaada ...
Dhibaatada halkaan ka jirta ma ahan xigashooyinku, waa shuruudaha (ka baxsan ama aan ahayn) QODOBKA oo aan waxba soo kordhineynin oo kaliya abuuraya khilaaf aan loo baahnayn.
Marka sidaas? Maxay tahay, maxay calaamadeynta dadku keenaysaa?
Waxaan ku bilaabaynaa inaan cadeeyo inaanan xumaanayn, waxaan horeyba halkan ugu iri dhowr jeer, ma qaato shaqsi ahaan wixii aan ka akhriyo shaashadda.
Laakiin markaad qoraysid maqaal ka muuqda adduunka oo dhan waxaad leedahay mas'uuliyad cayiman.
Tusaale ahaan, waddanka aan ku noolahay, ereyga "madow" ma laha macno cunsuriyad ku dheehan tahay oo cunsuriyad ku dheehan tahay. Laakiin xitaa uma isticmaali karo inaan ku tilmaamo saaxiib la yiraahdo haddii aan qoro wax ay aqrin karaan dadka ka yimid waddan kale taas oo sumad taas oo kale ah ay dhaawici karto.
Sidaas darteed haddii aad u malaynayso in:
- Iskuday inaad xoogaa taabato kubadaha;) »
Waxaa laga yaabaa in midka maqaarka khafiifka ah leh ee shakhsiyan u qaata uu yahay adiga.
Tan, waxaan rajeynayaa inay cadahay inaanan dhihin waxaad dooneysaa inaad qof ka xumaato.
Taabadalkeed, adeegsiga ereyadaas waa ku qaldan tahay aragtida tifaftirka.
Raadi warbaahin kasta oo sumcad leh oo fiiri haddii maqaalladoodu u muuqdaan codad sidaas oo kale ah, xigashooyin iyo in kale.
Waa iyada oo aan marna qofna si gaar ah loo calaamadin. Si kastaba ha noqotee, waan ku celinayaa, haddii aad rabto inaad su'aal ka keento shuruudaha, foomamka, ama wax kasta oo ay ku saabsan tahay shaqada ka jirta DesdeLinux, waxaan horeyba ugu xiray xiriiriyaha xiriiriyeyaasha xiriir ee midkeen kasta oo naga mid ah.
Oo yaa yidhi calaamadaha ayaa gaar ah?
Waxaad si fiican u calaamadeyn kartaa KOOX (oo ka kooban DAD) ama guud ahaan, oo aad leedahay natiijo isku mid ah.
Waxaan u maleynayaa in qodob kale oo la tixgelinayo ay tahay in faallooyinka ay yihiin hab sax ah oo sax ah oo jawaab celin ah oo laga helo baloog.
Shaqaalaha Luqadee ayaan ku weeydiinayaa? Ruushka? . только писать комментарии, которые не имеют ничего общего с темой поста .. mise waxaad ka jeceshahay afka Turkiga? Sadece yazının konu ile ilgisi olmayan yorumlarınızı yazabilirsiniz ..
Che, gabal bini'aadam ah ... mid kastaaba wuu ka jawaabayaa oo wuxuu isu keenayaa maqaal ay heesaan. Jooji wicitaanka dareenka sida aad u malaynayso inay tahay inay jawaab ka bixiso. Kani waa baloog ay leeyihiin dad wanaagsan waxayna isku daraan maqaallo sida ay kari karaan, doonaan ama jeclaan karaan.
Maxaa kugu dhacaya inaad ka maseyrayso in dadka sidaad sheegto wax u qoraan iyagoo aan sarbeeb doqon ah iyo ka saxsan ay kaa akhris badan yihiin.
Habeen wanaagsan, qayb ka mid ah aadanaha oo maxaad u eegi weyday "doqonnadaada shucuurta ah" ee aad uga cadhaysan waxa aad isku deyeyso inaad tilmaamto.
Waxaan kuu sheegi karaa inaad si sax ah u sameyso isla wixii aad kuu dhibaya, cilmi-baarayaasha saadaasha ayaa ugu yeera.
Laakiin waxaan si fiican kuugu sharraxayaa waxa aniga iyo adiga noo dhexeeya.
Ma isku dayayo inaan ahaado xarunta dareenka gabi ahaanba, guulaha aan gaadhay waxay ku jiraan shaqadayda iyo shaqsigayga, halkan internetka, ma isticmaalo magacayga dhabta ah, sidaa darteed feejignaan kasta oo aan helo waligay ii noqon mayso.
Waxaan u qoray maqaallo xitaa boggan, marwalba waan ogahay in wax kasta oo la daabaco ay dhaleeceyn ku yihiin. Midka aan ku qoray desdelinux, waa la igu dhaleeceeyay (siyaabo aad ufiican maaha) xitaa qoraalkayga, laakiin kamaan xumaan, maanan waydiisan ixtiraam, aad iyo aad ayaan ugayaryahay, cabashooyinka waxaa layla soo xiriiray boostada. Taas bedelkeeda, waan aqbalay cilladahayga qoraa ahaan waxaanan ballanqaaday inaan isku dayi doono inaan horumariyo.
Marka laga hadlayo hadal sarbeebeedyada waxaan kuu sheegayaa, uguyaraan wadankeyga, dukumiintiyada rasmiga ah ee dowlada inay mamnuuc tahay in loo isticmaalo "nacasyo doqonno ah" qaarkood oo ku xadgudbi kara kooxo gaar ah, in kasta oo warbaahintu aysan haysan mamnuucyadan, uma isticmaalaan si fudud XAAS .
Sida aan ku xusay humanOS:
Dhinaca kale, aniga iima muuqato in FSF ay tahay inay waqti ku lumiso ku dhawaaqista waxyaabaha sidan oo kale ah, marka horeba, maxaa yeelay si fudud cidina ma dhageysan doonto. sidaas?
Waxaan sidoo kale awooday inaan arko bilowga iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus, waana inaan sheegaa inaan xishooday. Apple waxay soo saartay laba taleefan oo, ka saarayso processor-ka iyo kamaradda, hadda adeegsanaya tikniyoolajiyad laga soo bilaabo sanadkii 2012… 1080p, NFC? fadlan ... laakiin haye, dadka isticmaala Android way yaqaanaan waxa aan ka hadlayo.
Apple marwalba way isku mid ahayd, wax soo saarkoodu si xad dhaaf ah ayuu qaali u yahay oo faraq badan kuma lahan tartanka (kaliya qiimaha muuqda) laakiin waxay ku iibiyaan astaanta, maxaa yeelay dadka badankood oo aan waxba ka fahamsanayn dhinaca farsamada ama tikniyoolajiyadda guud ahaan waa ta iibsata, qof wax yar ka og maadada ma iibsado. Waxayna ila tahay wax xoogaa iga badbadis ah in FSF ay u soo baxdo inay dhahdo wax qof walba (isagoo tixraacaya dadka xiisaynaya barnaamijyada bilaashka ah iyo guud ahaan tiknoolajiyada) ogyahay, tufaax markasta (sidaan qabo) wuu ka xumaa microsoft, maxaa yeelay waa shirkad suuq geyn ah oo waligeedba waxay ahayd, laakiin dadka iibsada wax soo saarkooda kuma jiraan bogaggan oo aad uma xiiseynaya adduunka barnaamijka bilaashka ah
Ku jawaab santiago alessio
Shakhsiyan, kama jecli Apple gabi ahaanba, qiimaheeda iyo siyaasaddiisa labadaba. Maalin dhaweyd oo aan akhriyey (ma aqaano sida ay run u tahay) in iphone-ka oo nagu kacaya $ 800 illaa Apple uu ku kacayo $ 200 ... Heshiis wanaagsan, sax?
Wax aniga iga argagax geliya, oo aanay iyagu faallo ka bixin, ayaa ahaa lacagta Apple. Shirkad keliya ha ogeysiiyo cidda aan la hadlayo, boggee ayaan aadaa, imisa rodol oo digaag ah ayaan iibsadaa? Taasi waxay ila tahay argagax. Haddii Apple uu sii wado inuu sameeyo sida uu yahay, oo ay NSA ka dambeyso, waxaan ku sii dhowaan doonnaa dejinta "Warbixinta Tirada Yar", waxaa qoray Philip K. Dick (buug aad u wanaagsan 😉), oo ay booliisku "saadaalinayaan" mustaqbalka iyo in la xiro dambiilayaasha intaysan dambiyo gelin.
Sikastaba, waa inaan sugnaa oo aan aragnaa halka ay ku dhamaaneyso liiskaani.
Kama fikirin in FSF ay si toos ah uga hadli doonto Apple. Waxaan aaminsanahay in hadalka mar qura ay wanaagsan tahay, in looga tago xasilloonida dadka fariinta helaya. Hadda waxaa la ogsoon yahay in mashiinnada ganacsiga ee Apple ay yihiin kuwo arxan-darro ah, adeegsiga alaabadani waxay la mid tahay xaaladda bulshada. Halkan Chile, Apple waxay ku qaadeysaa xoog iyo aad u badan heerka dukaamada gaarka ah ee xarumaha dukaamaysiga, waan ogahay dadka runtii aan lahayn dakhli muhiim ah, laakiin haddii ay u hayaan iPhone. Marka la soo koobo, in qof kastaa doonayo inuu isticmaalo waxa uu jecel yahay, kaliya waa in isku dheelitir lagu gaadho meesha xuquuqda gaarka ah ee qofka isticmaala ugu dambeeya lagu ixtiraamo inta badan.
Caadi ahaan dadka isticmaala GNU / Linux, iyo guud ahaan difaacayaasha barnaamijyada bilaashka ah, waxay ka qaadaan khadadka Microsoft, waxay ahayd waqtigii shirkaddan kale dhaleeceyn iyo faaf reeb lagu soo rogi lahaa, maadaama dhaqankeeda ay la mid tahay ama xitaa ka xun tahay kuwa waaweyn. ee 'Redmon', in yar oo magacyadooda ka mid ah: la shaqeynta hay'adaha amniga ee Mareykanka oo ay u soo gudbiyaan macluumaad iyaga oo aan ka eegin mid ka mid ah adeegsadayaashooda
Marka la eego waxa ay FSF leedahay, usbuucii la soo dhaafay markii ay dhacday xatooyada sawirrada dadka caanka ah ee Waqooyiga Ameerika, war aan si dhow ula socday, waxay ahayd wax laga xishoodo in la arko sida warsidaha keliya ee si cad uga hadlay in xatooyada ka dhacday iCloud ay ahayd Barnaamijka A3 Dhibaatada? Cabsi laga qabo dacwadaha suurtagalka ah? Masruufka? Jacaylka xad dhaafka ah ee astaanta (Antonio G. Ferreras iyo haddii iPad ...)?
Laakiin shaki la'aan waxa ugu xun ee summaddan leh waa anshax la'aan iyo dareen xasaasi ah, waxay ku wareegaan dacwadda "dhammaan Masiixa" khayaanada iyo ku xadgudubka patentka markii ay tufaaxdu tahay waxa ay ugu mahadnaqdo isha furan. Taasi waxay noqon laheyd Mac OS X bilaa BSD, waxay noqon laheyd sanado kadib markii shirkada la dhameystiri lahaa, mana ahan inay tahay dhaqan sharci ah, kaas oo ah, laakiin sida aan ognahay in sharcigu uusan had iyo jeer anshax iyo aniga aheyn, iyo kuwa kale oo badan oo difaacaya barnaamijyada bilaashka ah Qaadashada il furan, hagaajinteeda iyo intii lala wadaagi lahaa, xakamaynta ayaa ah mid anshax xumo ku ah qof walba.
By the way, seddex ama afar sano ka hor waxaan iibsaday Mac Book Pro, waxaan bilaabay inaan aqriyo dhamaan shatiyadeeda sedex maalmood kadibna waan soo celiyey, markii karraanigii i weydiiyay waxa qaldan, waxba ugama jawaabin, si fudud uma aanan ka helin , Waxaan ahaa softiweer bilaash ah oo daafac ah mana aanan ku raacsaneyn nidaamka ruqsad siinta, wuxuu ii sheegay inay tahay markii ugu horeysay ee Mac loo soo celiyo oo ay ku dhowdahay in "cilad" lagu rido sanduuqa si looga hortago gurigu inuu i garaaco oo uu i siiyo "Xanuunka dabada" muddo dheer.
Haddii aad tahay u doodaha barnaamijka bilaashka ah, maxaad cadaabta u iibsatay Macbook Pro?
Xog qaldan awgeed, waxaan u maleeyay in lagu saleeyo BSD ay noqon doonto mid furan; mana aanan iibsan, waan soo celiyey.
Wixii PC-ga ah waxaan ka fikiri karaa barnaamij gebi ahaanba asal ah; VEGNUXNEONATOX; telefoonnada gacanta; UbuntuPhone.
Muddo sanado ah waxaan arkey muuqaalka nafsiyeed ee Stallman iyo "Free Software Foundation", sidoo kale shirkadii uu ka dhintey Steve Jobs.
Aasaaska aan ku taageerayo qoraaladayda waa:
FSF waxay la mid tahay EFF, ICANN, OSI, INTERNIC, IEEE, taasi waa, ururada caalamiga ah ee "PLURALIZE" isgaarsiinta iyo heerarka teknoolojiyada guud ahaan, shahaadooyinka ISOS "tayada" sidoo kale lama keydin.
Tijaabinta: FSF waxay ka hadlaysaa xorriyadda, hase yeeshe markay barnaamijku adeegsado luqad aan lacag la'aan ahayn, sida C ++ si uu ugu fiicnaado maktabadaha GNU-TLS, aasaaska ayaa ka tallaabaya.
EFF iyo mashruucooda TOR, waxay ka hadlayaan magac daro On-Line, hadana waa wax kale laakiin waa intaas.
ICCAN ma aqbasho domainka asalka ah ee COM, sida: mywebdeinformatica.CORP
Iyo wixii la mid ah ... aniga aragtidayda dhammaan hay'adaha nidaaminta tiknoolajiyada waxaa soo rogay shirkado caan ah oo caalami ah, oo ku xiran siyaasadda iyo diblomaasiyadda, waxaanan raacnaa heerarka jaamacadaha =)
Dhinaca kale iPhone iyo tiknoolajiyada kale ee xaddidan, waxay astaan ​​u tahay shatiyada teknoolojiyada xiran, oo ay ka mid yihiin Android, Nokia, iPhone, in la sii wado waa in la xayaysiiyo.
Gunaanad, qofka bini aadamka ahi xor uma aha inuu doorto barnaamij bilaash ah ama softiweer gaar ah, maxaa yeelay, sida aan u aragno labaduba waa sida siyaasada bidix iyo midig; been abuur ah.
Nooca kaliya ee xorriyadda aan ka fikiri karo ayaa ah inaan u adeegsado awooddooda tiknoolajiyadda naftooda.
Ku jawaab Franz
Telefoonka Ubuntu waxaa ka maqan barnaamijyo badan. Ilaa iyo inta ay sidan ku sii socoto, horay uma sii socon kartid.
Faalladaadu waxay umuuqataa mid sax ah.
Laakiin waa inaad ka aragtaa farqiga u dhexeeya FSF iyo kuwa kale aragtida laga qabo astaamahooda, maxaa yeelay haddii aynaan isbarbar dhigayn, anigu garan maayo, nabadda cagaaran ee UNICEF.
Adeegsiga tusaalooyin isku mid ah:
Haddii ICCAN aysan aqbalin cinwaanno gaar ah, cidina ma isticmaali karto.
Haddii aad rabto is dhexgal ka dhexeeya aaladaha waxaad u baahan tahay barakada IEEE.
Taasi waxay maamushaa QAXDIRADA ururka.
Sharciga FSF wuxuu xukumaa GUDAHA oo kaliya wuxuu xukumaa mashaariicdiisa, laakiin haddii qofkasta uu doonayo inuu abuuro xarfaha 'C ++' waxay qaadan karaan koodhka oo ay ku samayn karaan (Iyaga oo keligood ah) taasna waa u bilaash taas.
Inta soo hartay waxaan si buuxda ugu raacsanahay, xitaa FSF waxay ka hooseysaa waxa ay dalal badan oo waaweyn oo xakameeya noocyada kala duwan ee teknoolojiyada noo oggolaadaan inaan ku sameyno qalabka.
Dhowr usbuuc ka hor muylinux ayay ku weydiiyeen su'aasha, Yaa xukuma isha Furan?
Tani waxay ahayd jawaabtayda:
“Kuwa gacanta ku haya Open Source waxay la mid yihiin kuwa xukuma software-ka lahaanshaha.
Laakiin xakameyntu ma ahan mid dhameystiran, si kasta oo ay isku dayaan, ma soo rogi karaan oo kaliya waxa ay doonayaan, sidaa darteed waxay si fudud "u sameystaan ​​hal shay oo moodada" ka dibna mid kale, iyagoo isku dayaya inay dib u dhigaan sida ugu macquulsan maalinta ay lumiyaan xaalad taas oo lama huraan ah
Waxay ku dhacdaa farshaxanka (muusikada, filimada, buugaagta) halkaasoo ay ku dhegaan qaababkoodii hore ee suuqgeynta.
Waxay ku dhacdaa siyaasadda, taas oo qofna (iyada oo aan loo eegin nidaamka hadda jira ama nidaamka siyaasadeed) uu doonayo inuu iska daayo qaab nololeedkiisa elitist oo ay sii wadaan aberiyada sida boqortooyooyinka, iyagoo ilaalinaya boqorrada qurxinta canshuuraha dadka.
Software-ka, oo horeyba uga mid ahaa nolosha aadanaha, looma dhaafo xaaladdan, nasiib wanaag liisanka bilaashka ah, wax kasta oo ay barnaamij u adeegsadaan ayaa looga hortegi karaa :) »
Weydiinta "bidix iyo midig" waa doqonimo iyo jaahil.
Kala soocida noocan oo kale ah waxay si ba'an u baabi'isaa sababaynta ku wajahan laamaha kala duwan ee fikirka.
Ma aanan ogeyn in luuqadaha barnaamijyada la sharciyeeyay. Inta aan ka fahmay, hirgalinta luuqadahaas waa kuwa lasiin karo. Hadday sidaas tahay, waxaan jeclaan lahaa inaad daabacdo iskuxir ka kooban macluumaadka sharciga ah ee nidaamka liisan bixinta lagu sheegay, taas oo ah wax aan raadinayey oo sida muuqata garsoore uu mar hore xukun ku riday arrintaas.
Aamiin…. Waxay ku bilaabi karaan iyagoo tirtiraya dhawaaqa, walaalkay wuu dhintay wuxuuna ka tagay iphone 4s aan loo isticmaali karin sababo la xiriira istacmaalkooda, taleefanka gacanta waa la bixiyay laakiin iyagu ayagaa iska leh… waxaan ka jeclahay android xoriyadeeda balaaran.
Taasi waa wax ku badan aaladaha noocaas ah. Waxa aad sameyn karto waa: ama soo dejiso macruufka gudaha qaabka faylka qalabka oo ku fur iyaga iTunes (xiriir hore oo la sameeyay iyo bandwidth wanaagsan oo lagu soo dejinayo firmwares barakaysan, dabcan). Iyo sida EsferaIphone u dhaho, ha isticmaalin safari si aad u soo dejiso haddii ay dhacdo inaad kujirto Mac oo leh OSX.
Sikastaba, Apple waxay haysaa wado dheer oo ay ku aaddo inay nagu jees jeeso haddii ay rabto inay innaga dhigto weylaha. 😛
@Hugo: Bilowgii waa inaan caddeyn qodob; ma jiro iPhone oo warshad xiran, qofka kaliya ee intaas sameyn kara, oo kaliya haddii ay rabaan, waa milkiilaha qalabka. Qofka kaliya ee awooda inuu furo wuxuu ahaa walaalkaa (qepd) waxaana lagayaabaa inuu doortay inuu uqrixiyo qaab amniga ah. Waa in la caddeeyaa in aysan jirin MAYA - inta aan ogahay- sida loo furo. Sida kaliya ee aan ku ogahay waa inaad tagto xarunta adeegga Apple, sharaxaad ka bixiso wixii dhacay, iska hubi in iphone uusan xadin, waxayna kaa caawinayaan inaad soo ceshato furaha sirta ah.
Marka waxaan cadeynayaa markale: Apple maahan kan iPhone xiraya, laakiin dadka mashiinka laxiriira xisaabtooda iTunes ee shaqsiyeed. Waa tallaabo amni oo loogu talagalay dadka isticmaala oo ay maamusho dadka isticmaala.
Isla taas. Apple waxay leedahay cabirkan amniga ikhtiyaariga ah, sidaa darteed codsigaas waxaa lagu sameyn karaa websaydhka Apple haddii ay dhacdo waddanka aad ku nooshahay uusan weli lahayn baararka caqliga.
Waan jabaa Tani waxay la mid tahay ciyaar kubbadda cagta oo koox kasta kooxda ka soo horjeedaa ay tahay ninka xun ama midka aan haysan wax fikrad ah ama aan aqoon ama uu yahay dameer (haa, waxaan ku idhi kalgacal si aan fiicnayn).
Mudanayaal, adeegso waxa ka soo baxa kubbadahaaga (haa, waxaan idhi kubbadaha), waxa adiga kuu faa iidada badan, waxa noloshaada wax yar ka xaliya iyo / ama waxa aad u rabto si fudud dartiis oo kuwa kalena iyaguna u daa. waa Maxaa duugoobay? IYO? Waa maxay bilaash? IYO? Waa maxay waxa adduunka ugu cakiran? IYO? Waa maxay waxa ugu dareenka badan? IYO? Way kuu shaqaysaa Ma jeceshahay Hagaag, iibso hadaad awooddo oo aad ku raaxeysato, taas oo ah inaad lacagtaada ku bixisay.
Iyo haa, waxaan isticmaalayaa MacBook Pro 15 ″ laga soo bilaabo 2012 (tiknoolajiyaddu runtii hubaal in badan oo idinka mid ah) iyo Opera (midka loo beddelay mashiinka sharka sharka ah ee hadda lagu eedeeyay inuu yahay dib u soo noqosho).
Noloshu waa in lagu raaxeystaa wax kasta oo aad rabto.
Ka fikirida foorida halkii maskaxdu ku xumaanayso bulsho fawdo ah, iyada oo aan amar iyo aragti midna lahayn.
Waa ceeb in lagu dhex noolaado intaas oo badan hooligans in lagu xardhay hal falsafad.
PS: Faallo wanaagsan.
LOL…! Si aad u wanaagsan ayaad u tiri, Lynze, waa inaad aragtaa dhibaatada ka dhalanaysa adeegsiga erayga "Taalibaan" - sidaas darteed, oraahyada oraahda -: dhinac ka mid ah, dadka qaar ayaa dharkooda jeexjeexa maxaa yeelay waxay tixgeliyaan in taageerayaasha softiweerku lacag la'aan yihiin ay dhibi karaan… ah… laakiin cidina wax kama dhaho adhiga tufaaxa lidka ku ah! Sababtoo ah iyaga iyagu waa kuwa isticmaala Apple. Si kale haddii loo dhigo, laba jibbaarada markaa: doonista Quduuska ah ee Ilaah waa in la sameeyaa, laakiin waa dibi digaageyga.
Isla taas. Wax la mid ah ayaa dhacaya markii aad la kulanto daaqad daaqad ka Linux ka badan wixii kale ee aad waligaa la kulantay, adigoo og faa'iidooyinka iyo qasaaraha labada barxad iyo ujeedo badan oo ujeedo leh marka loo eego kan xayawaanka ah ee lagu xaragoonayo hal madal ee SW.
Waa salaaman tahay Eliotime!
Hagaag, waa inaad fiirisaa hadalada: "kala fogaanshaha iyo macaamil xumida", "weerarka waalida iyo doqonimada", "malaayiin nacasyo ah" ... ka dibna aad hesho "jawharado" sidan oo kale ah: Waa fikrad khaldan in ay joojiyaan isticmaalka iyaga oo tixraacaya kuwa mowqifka adag ka taagan xorriyadda barnaamijyada. (sic)
Taasi waa heerka laba-laabka naxdinta leh ee hal-ku-dhegga populist ee dad badan, dhammaantood maahan laakiin nasiib darro badankood, taageerayaasha Barnaamijka Bilaashka ah.
Shakhsiyan, waan la joogayaa wixii Franz yidhi ... waa fikirka ugu caqliga badan, ujeedada iyo aasaaska leh ee aan aqriyay. Mahadsanid kun Franz!
Waxaa jira si sax ah dhibaatadaada. Miyaad sameysay xisaab adag oo heer caalami ah si aad u ogaato in inta badan taageerayaasha barnaamijyada bilaashka ah ay ku sifeeyaan "heerkaas naxdinta leh ee laba-geesoodka ah ee hadallada populist"?
Aan kuu sheego taasi waa wax aan macquul ahayn. Kaliya sax oo weydii ixtiraam dadka aad ku aragtay ifafaalahaas.
Dooda Lynze aad ayey uxun tahay. Iyada oo ku saleysan raadsashada raaxada iyada oo aan la tixgelin cawaaqibka ficillada bulshada guud ahaan. Kama soo horjeedo adeegsiga aalado kala duwan hadaad u baahato inaad isticmaasho. Laakiin halkaa si loo qaato mowqif aan danaynayn dadka kale iyo dhibaatooyinka bulshada, waa wax laga naxo oo waxay ka timaadaa qof aan dhaliil badan lahayn. Hagaag, softiweerku qalab ahaan wuxuu kuxiranyahay miyir qabka qofka, sidaa darteed waxyaabaha ku hareeraysan iyo isticmaalkiisa waa in la barto.
@Xerix: Dhibaatadayda waxaad leedahay? Hagaag, fiiri heerkaaga labalaabka ah, aniga, sida kuwa kale, waxaan galaa ciyaarta oo waxaan idhaahdaa waxay ila tahay. Miyaanay ahayn waxa qof kastaa sameeyay, oo uu ku jiro Jhon Sullivan laftiisa? Muhiim ma aha in la soo bandhigo caddeynta wax; CIDNA AY ISUGU SOO dhiibtay iyaga, sidaa darteed taasi waa sharciga ciyaartaan. Marka maxaan ugu qasbanahay inaan wax caddeeyo? Ha u oggolaadaan kuwa xaqiijinaya inay jiraan "shisheeye iyo macaamil xumo", "oo ku saleysan raadinta raaxada iyadoon la tixgelin cawaaqibka ficillada bulshada guud ahaan", "weerarka waalida iyo nacasnimada" iyo "malaayiin nacasyo ah ayaa caddeeya ! ”!
Marka kani ma aha mowduuc si xor ah looga hadlo? Mise waa inaad kaliya ka hadli kartaa xumaanta Apple iyo isticmaaleyaasheeda oo hadaadan sidaas yeelin, waxaad tahay qof "aan aad u naqdin"? Halkan waxa aan arkaayo waa ka xumaadeen taageerayaasha Barnaamijka Bilaashka ah ee Free, iyagoo dambas ku tuuraya madaxooda oo jeexjeexay dharkooda maxaa yeelay waxay isticmaaleen ereyga "Taalibaan" laakiin ma arko qof adeegsada Apple oo ka cabanaya "adhiga Apple-diidka ah" ama xaqiiqda baaqaas iyaga "shisheeyaha", "waalan", "doqon" iyo "doqomo" maxaa yeelay ugu dambayn maadada noocan ah cidina waligeed cadeyneyso wax uun, waxay soo dhajin doontaa oo kaliya waxay u maleynayaan waana taas.
Kama soo jawaab celin dhaliilteyda. Kaliya waxaan isku darayaa jajabyada iyo qaybo ka mid ah faallooyinka dadka kale waxaanan abuurayaa hal dood oo si khaldan loo beensheegay oo adiga ku habboon.
Sifiican ugama aadan aqrin faallooyinkeyga: "Kaliya sax oo weydii ixtiraamka dadka aad ku aragtay ifafaalahaan."
Meeshii aan ku sharaxay, inaad caqli xumo kahor aad saxdo dadka kale ee qaldan. Iyagu waa kuwa adeegsada softiweer bilaash ah ama lahaansho ah. Dhaleeceyn badan oo ka mid ah kuwa taageera software-ka bilaashka ah waxay iila muuqdaan wax xun. Sida qeexitaanka "nacasyada" dadka isticmaala nidaamyada kale ee hawlgalka. Laakiin taas maahan, waxaan u fasirayaa taas: "Taasi waa heerka laba-geesoodka ah ee naxdinta leh ee hadallada populist ee dad badan, maahan dhammaantood laakiin nasiib-darro inteeda badan, ee taageerayaasha Barnaamijka Bilaashka ah."
Mana aqriyo faalladayda ah: "Kama soo horjeedo adeegsiga qalab kala duwan haddii aad u baahan tahay inaad isticmaasho."
Sidoo kale waligaa ha ka hadlin Apple iyo adeegsadayaashiisa, sidaa darteed taas kuma aanan gelin.
Si aan cudurdaar lahayn loogu calaamadeeyo isticmaaleyaasha naaneysyo naaneestayaal ah lama sameyn karo. Haddii kale, dooddaadu waa mid aan lagu kalsoonaan karin. Tanina waxay khusaysaa dadka oo dhan.
Waxaan dhaleeceeyay dooda Lynze oo aan sheegay sababaha keenay. Aniguna waxaan dhaleeceynayaa kuwa sida qaldan uga hadlaya Apple ama adeegsadayaasheeda.
Horaan kaaga jawaabaa. Inaadan jeclayn jawaabtaydu waa tigidh kale runtiina ma doonayo inaan ka doodo wax aan jirin - maxaa yeelay aniga iyo adiga labadeenaba waxaan kaliya oo aan soo bandhigi doonnaa fikradaha ku saleysan 'doodaha', waxaan kaliya rabay inaan muujiyo waxa aan u maleynayo, waana aniga weli ka feker, ku saabsan inta taageerayaasha ah Barnaamijka Bilaashka ah ee loola dhaqmo dadka isticmaala nidaamyada kale ee hawlgalka.
Dhanka kale, aqri ugu yaraan hal buug, fadlan ... shaqo badan ayey ku qaadataa in lagu fahmo!
«Kaliya waan isku daraa…» Kaliya kelinimada (sifada) mise kaliya (xayeysiinta)? Waxaan isku daraa: isku xidhka xaalada taagan, dabeecadda tilmaamaysa, ee falka isku darka qofkii ugu horreeyay: «waan isku daraa ...» Miyaad u jeeddaa inaad, kelinimadaada, isku dhexjirto?
«Ie Qaybaha faallooyinka dadka kale waxaanan abuurayaa hal dood oo la been-abuuray si aad ugu fududaato. - Waxaan rumeysanahay: isku xirnaanta waqtiga xaadirka ah, dabeecadda tilmaanta, falka in la rumeeyo qofka ugu horreeya: «Waan aaminsanahay ... Ma waxaad isku dayeysaa inaad ii sheegto inaad rumeysan tahay dood ku habboonaanta ...?
»" Kaliya sax oo weydii ixtiraamka dadka aad ku aragtay dhacdadan. "» Sax? Waa maxay macnaha erayga Corriga? Caadi ahaan? Miyaadan isku deyin inaad dhahdo freak? Ma waxaad u jeedaa dhacdo ama dhaqan?
"Meeshii aan ku sharraxayo, in caqli-xumada ka hor aad saxdo ..." Sharax: isku-xirnaanta xilligan xaadirka ah, dabeecadda is-dhexgalka ah, ee falka ku sharax qofka koowaad: "Waan sharxayaa ..." Ma sharraxaysaa?
Suuxdinta qofka labaad ee ku habboon xaalad daruuriga ah: «Adiga ayaa sharxaya ...» Ma waxaad iga dooneysaa inaan sharraxaad ka bixiyo? Haddana, maxay "sax" macnaheedu tahay?
«Laakiin taas maahan, waan fasirayaa ..» Waxaan fasirayaa: iskuxirashada mustaqbalka, dabeecadda is-beddelka ah, ee falka fasiraya qofka koowaad ama saddexaad: «Waan tarjumayaa ...» «isagu; iyada; waad turjumi doontaa… »Miyaad tarjumaysaa? Ma u turjumayaa? Ma u fasirayaa?
"Sidoo kale waligaa ha ka hadlin Apple iyo isticmaaleyaasheeda ..." Hadal: isku xirnaanta xilligan, dabeecadda lama huraanka ah, ee falka ku hadlaya qofka labaad: "(adigu) ma hadashid ..." Ma waxaad dooneysaa inaad u sheegto ma inaan ka hadlo dadka isticmaala Apple? Ku xirashada xilliga la joogo, dabeecadda isku-xirnaanta, ficilka ah in lagu hadlo qofka ugu horreeya: «waan kuhadlaa ...»
Iyaguna waa tusaalooyin qaar, maxaa yeelay waxaad adeegsataa ereyo badan oo lahjad ah adiguna waxaad dhaafaysaa lahjadaha. Ma dooneysid inaad ku doodeysid in xitaa si liidata loo qoro waxaad isku dayeyso inaad tiraahdo waa la fahmay maxaa yeelay taasi waxay ku dhacaysaa aagga "hubinta"; haddii aadan fahmin tan «… Waan jeclahay kuwa kale waxaan gala ciyaarta oo waxaan idhaahdaa waxa aan isleeyahay.» in aan si cad u qoray, maxaan kuugu fahmayaa haddii aad si xun wax u qorto oo aad qalad higgaad ah u qorto Sidoo kale ... kaalay ninyahow, waxaa jira nolol ka baxsan Software-ka Bilaashka ah runtuna waxay tahay inay kuu fiicnaan laheyd inaad aqriso dhowr buug oo wanaagsan, kuwaas oo wax badan ka caawin doona hagaajintaada shakhsi ahaaneed, intii aad waqti ku lumin lahayd ka hadalka waxyaabaha aan micnaha lahayn ila qabo! Tan ayaan ku dhammeeyey dooddayda, maxaa yeelay, inaan sii wado dooddayda doqonnimo bay ka tahay dhinaceyga.
Gabi ahaanba waan kugu raacsanahay saaxiib. Opera Blink wuxuu isu badalay fargeetadii ugu fiicneyd ee Chromium ee aan ilaa hada la kulmay, runtuna waxay tahay ma arko wax qalad ah oo ka jira, kaliya waxay garan waayeen sida ugu fiican ee looga faa iideysto Chromium iyo Blink oo ay weheliyaan JS (haddii kuwa Mozilla ay ku guuleysteen inay sameeyaan akhristaha PDF leh JS oo keliya, waxaan jeclaan lahaa inaan arko macmiil emayl ah oo ku jira Opera Blink oo lagu diyaariyey JS).
Dhinaca kale, sida muuqata, waxaan arkaa inaad runtii wax badan ka helayso Mac-gaaga, maxaa yeelay waxaa jira fanboys ka mid ah astaanta oo iska tuuraya kumbuyuutarradu inay noqdaan "moodo", runtiina waxay tahay, haddii ay i siiyeen fursad aan ku isticmaalo 2012 Mac, waxaan si farxad leh uga faa'iideysan lahaa. Ma dhahayo waa a AppHole ama wax la mid ah, laakiin mararka qaarkood, oo aan aqoon madal maxaa yeelay si fudud waxaa kugu qaaday taallo Waxaan kaa dhigi karaa inaad dhahdo wax aan jirin iyo badh.
Oo iska ilaali: Waxaan aad uga warqabaa in Opera ay fuliso adeegyadeeda isku xirnaanta isku xidhka ee 'Opera Blink', maxaa yeelay marka loo guurayo Blink, adeeggan ayaa dhinac la dhigay.
Iyada oo leh laba kubadood, gebi ahaanba ku raacsan Lynze.
Waan ku raacsanahay in qof kastaa sameeyo waxa uu doonayo, laakiin mahadsanid FSF, ugu yaraan waan ogaan doonaa waxa laga filayo.
Apple aniga ahaan waxay noqotay shirkad la isku halleyn karo oo tayo leh, shirkad dhiirrigelisa kalsooni darro, sidoo kalena ay ka buuxaan niman khiyaano badan.
Laga soo bilaabo sawirada xaday ee iCloud ee caanka ah, aniga ahaan horeyba u ahaa cawskii ugu dambeeyay, fuck Apple, hubaal waligey ma iibsan doono mid ka mid ah noloshayda, mana jecli shirkadda ama kalsooni. Oo hadda waxay haystaan ​​waji adag oo ah inay sii daayaan "Apple Pay", ka dib wixii ku dhacay iCloud, sidee ayay ugu talo galeen inay ku dhiirrigeliyaan kalsoonida adeegsadayaashooda?
Waan ka xumahay inaan noqdo qofka sidaas iri laakiin talooyinkaas FSF waa kuwo aan qiimo lahayn.
Apple (aka Fanboy) sheyga jecel wax macno ah ma siinayo waxa ay alaabooyinkani sameeyaan iyaga oo aan ogolaansho ka haysan.
Iyo dadka caadiga ah, maahan geek sidayada oo kale, kuwa aan fahmin sida ay wax u shaqeeyaan, kaliya waxay rabaan inay awooda siiyaan oo wax waliba iyaga u shaqeeyaan. Haddii ay lacag la’aan tahay iyo haddii kaleba, ama ay leedahay DRM, iwm, waa guul-darro, badankood xitaa ma yaqaaniin waxa loola jeedo waxyaabahaas.
Haa, waa hagaag. Waxaan rajeyneynaa in qof la yimaado isagoo adeegsanaya GPG sida DRM si uu u sameeyo wicitaano fiidiyoow ah oo qarsoodi ah adoo adeegsanaya WebRTC iyo astaamaha si loogu yeero DRM (kiisaska mala awaalka ah, GPG) ee HTML5 (talooyinka MPAA).
Yoyo, waad ogtahay waxa Apple ay ku sameyso xogtaada waxaadna dooratay inaad sii wadato adeegyadeeda, laakiin waxaa jira dad badan oo aan ka warqabin Apple dhinaceeda qarsoon, taasi waa sababta ay u jiraan talooyinka FSF, sidaa darteed, markii aan helno dhamaan macluumaadka, waxaan si xor ah u dooran karnaa wixii aan isticmaali lahayn. Waxaad dooratay inaad sii wadato adeegsiga Mackintosh, waxaan doorbidayaa inaanan doorin, laakiin ugu yaraan, waxaa nalagu wargaliyay cawaaqibka.
Shisheeyaha iyo macaamilka oo sii xumaaday ayaa wada socda oo loogu talagalay kuwa si waalli ah iyo doqoniimo leh, u isticmaala alaabooyin tayo hoose leh qiimo sare. Ma aha in la xuso xaddidaadaha la xiriira xorriyadaha shaqsiyeed iyo basaasidda dhammaan macluumaadkaaga shakhsiyeed. Malaayiin nacasyo ah oo daafaha dunida ku nool ayaa xoriyadooda shaqsi ahaaneed siiya Walaal Weyn maalin kasta (u akhri si kasta oo aad doonayso inaad u akhrido) ka dibna u ooyaan wixii ay bixiyeen ee aanay lumin.
Maqaal aad u fiican iyo xitaa ka sii badan maxaa yeelay waxay cadeyneysaa waxyaabo badan oo hubaal in badan oo naga mid ahi aysan ogeyn.
Markii aan iska diiwaan galiyay Apple si aan ugu baaro AppStore-ka iTunes, waxay igu kaliftay inaan ku xirnaado kaarka amaahda / debit-ka. Si kastaba ha noqotee, markii aan ka soo galo iDevice, ma aanan sameyn. Maxaad ugu yeertaa taas?
Xaqiiqda ah in FSF ay difaacayso ilkaha iyo cidiyaha barnaamijka bilaashka ah macnaheedu maahan inay waajib nagu tahay inaan raacno tilmaamaheeda.
Midkastaba wuxuu qaadanayaa wuxuu ubaahanyahay siduu kudhaqmayo. Dhankeyga waxaan doorbidayaa jawiga ugu xorta ah, wax kale majiraan
WALIGE, waana hubaa inaan haysto badeecad Apple ah, marka laga reebo xannibaadahooda waa kuwo aad qaali u ah oo aan haba yaraatee fiicnayn, waa tusaale in alaabooyinka loo iibsado in ka badan astaanta marka loo eego tayada ayan lahayn
Taasi waxay kuxirantahay aragtida dal kasta iyo dadkaba, Mareykanku wuxuu ku iibsan karaa wax soo saarka Apple mushaarka ugu yar maadaama dhaqaalaheeda uusan ku xirneyn sicirka sarrifka iyo sicir bararka sare marka loo eego wadamada Latinka oo TABU weyn ku leh dhaqaalahooda, sida kiiskeyga Venezuela. In la yiraahdo badeecaddeedu waa qaali waa wax aan aasaas lahayn maxaa yeelay Apple kuma lahan xarumo ku yaal waddanka X halkaas oo wax soo saarkiisa la soo dhoofiyo iyadoo lagu saleynayo sicirka sarrifka, sicir bararka badan iyo qiimaha macaashka ee iibiyaha oo laba jibbaaraya qiimahooda.
Waxaan u istcimaalaa GNU / Linux sida OS-ga ugu weyn laakiin anigu ma ihi qof xag jir ah oo xagjir ah, xagjir ah oo aan arkin wax ka baxsan fikradaha X, maadaama aan sidoo kale u isticmaalo alaabada Apple iyo Windows, mid waliba wuxuu leeyahay faa iidooyinkeeda. Tusaale ahaan, haddii Ubuntu uu doonayo inuu hal-abuurnimo sameeyo isagoo dib u qaabeynaya qaar ka mid ah GUI-yada softiweer kasta si ay ugu fududaato adeegsiga, xag-jiriinta ayaa soo baxa, iyagoo u-qalma oo sumcad-dil ku sameeya Ubuntu inaysan raacin ujeeddooyinkeedii hore.
Wax soo saarka Apple waa qurux badan oo si sahlan loo isticmaali karo qof kasta oo aan lahayn ugu yaraan aqoonta kombiyuutarka, kaliya waxay rabaan inay cunaan barnaamijyada moodada ku jira. In alaabada Apple ay xun yihiin ayaa u qalma iyo sumcadda dadka inta badan aan ixtiraamin himilooyinka kale. Hada qalabka ay Apple isticmaasho waa lamid yahay qofka kheyraadka leh uu awoodi karo maxaa yeelay meelna uma aad dooneyso inaad ka hesho alaab tayo sare leh xitaa hadii aad heysato GNU / Linux horay loogu rakibay wax kayar $ 1000.
Sidoo kale, laga bilaabo Linux waa inay mamnuucdaa daabacaadda noocan ah iyada oo la tixgelinayo inay keenayso khilaaf badan sababo la xiriira himilooyinka X.
Ku jawaab Chuk
Lacagta rasmiga ah ee Ecuador waa lacagta Mareykanka.
Marka Taliban ma xagjirbaa? Muxuu ahaa muujinta quruxda badani caan noqotay, ee cadaalad ah ... Maraykanka oo aad si fiican u dhisto sawirka adduunka!
Ku jawaab mmm
Anigu ma ihi xagjir mana u tixgeliyo FSF sidan oo kale. Ereygaas "Talibanka" waa fikrad khaldan oo ay tahay inay joojiyaan adeegsiga tixraaca kuwa mowqifka adag ka taagan xorriyadda barnaamijyada.
Dhankeyga, waxaan si aan dhammaad lahayn ugu mahadcelinayaa FSF waxtarka weyn ee abuurista iyo difaaca barnaamijyada bilaashka ah ay u sameeyeen aadanaha.
Oo Apple wuu i neceb yahay.
Maxay dadka qaar had iyo goor u caddeeyaan "mid walba inuu isticmaalo waxa ugu fiican ee uu jecel yahay"? Taasi waa wax iska cad. Arrintu waxay tahay miyaad ka warqabtaa inaad macluumaadkaaga qaaska ah ee muhiimka ah u siineyso shirkad shar leh. Tan tan, dadka caadiga ahi waxba kama oga. Xitaa sidaas oo ay tahay, xorriyadda dadkaas ay u leeyihiin inay adeegsadaan waxay rabaan waa inay adkaataa. Qofna uma diidin iyaga.
Waxaan awooday inaan isticmaalo (amaahdo) wax soo saarka Apple, waxayna muujineysaa tayo cayiman, in kabadan ipod dhan. Tusaale ahaan tayada shaashadda iyo codka, noocyada qoraalka, dhammaystirka qalabka. Markii aan rabay in aan galo OSX waxaan ku dareemay raaxo la'aan xarunteeda, maaddaama aanan sameyn karin Ctrl + Shift + V markii aan ku sii wareegayo ku darista taageerada FS kasta, iyo barnaamijyada konsol-ka ee ka maqnaa. Maaddaama dadka caadiga ah badankood ay eegaan oo keliya dibedda (wax kastoo aan marka hore xuso), taasi waxay sharraxaysaa guushooda.
Kadib arinta FSF, waxaan kuqaadan lahaa iniin cusbo ah, waxay kaloo dhaheen "ha iibsan ati", "ha iibsan Intel", laakiin hadii aan iibsado AMD waxaan iibsanayaa radeon ... wax iibso 😛
Waxaa laga yaabaa in maalin uun bini aadamku xaliyo khilaafaadkooda, oo wada noolaadaan sida walaalaha RUN ah!
Waxaan ku rakibi doonaa kombuyutarka walaalkay isla marka uu helo waqtiga uu kaga soo haajiro dhammaan faylalka uu ka soo dirayo darawalka adag ee laptop-kiisa.
Waxa ay sheegeen FSF waxay umuuqdaan kuwo la buunbuuniyay, marwalba waan qiimeeyaa aragtidooda iyo in kastoo waxa lagu sheegay maqaalka ay umuuqdaan xad dhaaf, xaqiiqadu waxay tahay inay wali saxanyihiin
Ku jawaab miguelonz
Haa !!! Aynu kacaanka ka dhigno… .. horjooge hortiisa sitting
Ku jawaab toñolocotedelano_e
Farsamada ayaa loo isticmaali karaa in lagu caburiyo dadka ama waxaa loo isticmaali karaa in lagu xoreeyo. Che Guevara.
Waxaan aaminsanahay inay taasi tahay sababta GNU / Linux iyo softiweerka bilaashku uusan u horumarin. Kaliya waa fikrad bilaash ah haddii aad rabto si furan ayaad uga doodi kartaa, xagjirnimada waa la aqbalaa haddii aad leedahay.
Weligay ma yeelan Smartphone, uma baahni, Google iyo Apple labaduba waa kuwa ugu badan ee ku xadgudba arrimaha gaarka ah wixii ka dambeeya dawladda Mareykanka. Muxuu cadaabta Stallman daneeyaa iPhone? Xitaa ma gaaro taleefan lambar 10 ama 20 dollar ah oo fudud.
Dadka caadiga ah ee jaahil ka ah arrimaha asturnaanta ayaa lagu khiyaaneeyey xayeysiinta macquulka ah waana sababta ay Apple wax u iibiso, ma garanayo sababta kaliya ee Canonical ay u sameyso, taas oo haddii aan ogahay inta badan dadka isticmaala calaamadaha ganacsiga aysan waligood fahmi doonin daryeelka software-ka bilaashka ah iyo kan furan oo aan xitaa maxaa yeelay waxaad tustaa kiisas basaasnimo ama cabsi gelin ah way ku dhegaysan doonaan.
FSF halkii laga baahin lahaa waxyaabo ku saabsan Apple waa inay ka shaqeysaa faa iidadeeda natiijada ka dhalatay warkan ayaa ah inaan aragno sida Linux Fanboys ay u nooshahay inta ay sameynayaan Microsoft ama Apple.
Waxaan u maleynayaa in dadka FSF ay sameynayaan qalad weyn markii ay timaado soo bandhigida wax soo saar ganacsi.
Waxaan u maleynayaa inay sameeyeen qalad isku mid ah, oo ay ku dhaleeceeyaan isla waqtigaas, kumanaan kun oo dad kale ah oo jecel suuqgeynta Apple, iyagoo ka hadlaya wax soo saarkooda (iyo lacag la'aan), kuwaas oo weli ah badeecado ganacsi, oo ay shirkaddu ku andacooneyso inay ku kasbato lacag badan intii suurto gal ah.
Si aad u aragto xorriyadaha Apple, waxaan kugu martiqaadayaa inaad ku akhrido Isbaanishka shuruudaha adeegga iyo isticmaalka iCloud, oo dhawaan dadka ka dhigtay inay hadlaan ... waa qasab ... taasi waa sida dadka isticmaala Apple ay xor u yihiin
Soo koobid (iyo sida John Oliver u dhigay hal-ku-dhiggiisa ku saabsan dhexdhexaadnimada saafiga ah):
Kaba soo qaad inay adiga ku ridaan el Mein Kampf heshiiska shatiga iTunes, adiguna waad garaaci kartaa oo keliya Waan aqbalay, waan aqbalay, waan aqbalay.
Desktop-ka ugufiican Linux: Ogosto 2014 - Natiijooyin